Ny toeram-pitrandrahana mpanjaka Solomon (ampahany 17) - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2016-02 mpandimby ny Magazine > Ny Harenan'i Solomona Mpanjaka (ampahany 17)
Ny fahatahorana ny Tompo no fahatahorana azy. Raha mila mamintina ny Bokin'ny Ohabolana iray ianao amin'ny andininy iray, dia ho inona izany? “Ny fahatahorana an’i Jehovah no fiandoham-pahalalana. Ny adala manamavo ny fahendrena sy ny famaizana” (Ohab 1,7) . teny 9,10 milaza zavatra mitovy: "Ny fiandoham-pahendrena dia ny fahatahorana ny Tompo, ary ny fahalalana ny olo-masina dia fahiratan-tsaina."
Ny andalana voalohany amin'ny Ohabolana 1,7 somary sarotra takarina noho ilay hevitra eto "Aza matahotra" tsy voatery ho tonga ao an-tsaina isika rehefa mieritreritra an’Andriamanitra. Avy amin’ny teny hebreo hoe “yirah” ilay teny nadika hoe “tahotra” hita ao amin’ny Baiboly maro. Misy dikany maro io teny io. Indraindray izany dia midika hoe tahotra tsapantsika rehefa tojo loza sy/na fanaintainana lehibe izany, nefa mety hidika koa hoe “fanajana” sy “fahatahorana”. Iza amin'ireo fandikan-teny ireo no tokony hampiasaintsika amin'ny andininy faha-7? Zava-dehibe eto ny contexte. Ny dikan’ny hoe “tahotra” eto amintsika dia aseho eto amin’ny tapany faharoa amin’ilay andininy hoe: ny adala manamavo ny fahendrena sy ny fananarana. Ny teny fototra eto dia ny fanamavoana, izay mety hidika koa hoe misy olona heverina ho tsinontsinona na atao tsinontsinona. Azo ampiasaina hilazana olona mafy loha, miavonavona, miady hevitra, ary mino fa marina foana izy io.4,3;12,15).
Augustin dia teolojiana kristiana voalohany izay nanoratra betsaka momba ny fahagagana mahagaga nataon’Andriamanitra. Ny iray amin'ireo sanganasany lehibe indrindra dia antsoina hoe "De civitate Dei" (amin'ny teny anglisy, an'ny fanjakan'Andriamanitra). Teo am-pandriany hahafatesany, raha nitangorona nanodidina azy ireo namany akaiky indrindra, dia nisy fahatsapana fiadanana mahatalanjona nameno ny efitrano. Tampoka teo dia nisokatra tamin’ireo olona tao amin’ilay efitrano ny masony, ary nanazava tamin’ny endriny mamirapiratra izy fa nahita ny Tompo ary tsy afaka nanome rariny azy izay rehetra nosoratany. Taorian’izay dia natory tamim-pilaminana izy 1,7 ary 9,10 lazao fa ny fahatahorana an'i Jehovah no fiandohan'ny fahalalana sy ny fahendrena. Izany hoe, ny fahalalana sy ny fahendrena dia tsy misy afa-tsy amin’ny fahatahorana an’i Jehovah ary tsy hisy raha tsy misy izany. Izany no fepetra takiana ho antsika mba hahafahantsika miatrika ny fiainantsika andavanandro. Ny fahatahorana an'i Jehovah no fiandohana; “Ny fahatahorana an’i Jehovah no loharanon’aina, izay tokony hialana amin’ny famatoran’ny fahafatesana” (Ohab. 1).4,27) , Raha mankasitraka sy manaja an Andriamanitra noho ny maha izy azy ianao, dia hitombo ny fahalalanao sy ny fahendrenao. Raha tsy matahotra ny Tompo isika dia manala ny tenantsika amin'ity harena sarobidin'ny fahendrena sy fahalalana an'Andriamanitra ity. Ny Fanantenan'ny Baiboly ho an'ny rehetra dia mandika ny andininy faha-7 toy izao: "Ny fahalalana rehetra dia manomboka amin'ny fahatahorana an'ny Tompo."
Raha te hiaina an’Andriamanitra amin’izany fanetren-tena izany koa ianao ka ho talanjona, dia ny vaovao tsara dia azonao atao. Aza manandrana manao izany anefa ny tenanao. Angataho Andriamanitra hametraka izany tahotra izany ao anatinao (Fil2,12-13). Mivavaha ho azy isan'andro. Saintsaino ny fahagagana nataon’Andriamanitra. Mahagaga Andriamanitra sy ny zavaboariny. Ny fahatahorana an’i Jehovah no valin-tenintsika rehefa hitantsika hoe iza marina Andriamanitra ary hitantsika ny fahasamihafana lehibe eo amin’ny tenantsika sy Andriamanitra. Hamela anao tsy hiteny Izy.